Turkiga oo ku biiray dagaalka Daacish looga saarayo magaalada Mosul – STAR FM SOMALIA
Turkiga ayaa ku biiray duulaanka qorsheysan ee Kooxda Daacish looga saarayo magaalada Mosul oo ah magaalada labaad ee ugu weyn Ciraaq.
Ra’iisul Wasaaraha Turkiga Binali Yildirim ayaa xaqiijiyay in ciidamadooda ay si toos ah uga qeyb qaadanayaan dagaalka Mosul.
Waxaa uu sheegay in ciidankooda ay caawinaad weydiisteen Ciidamada Kurdiyiinta, kaddib markii IS ay culeys soo saartay.
Ciidamada Turkiga ayaa saldhig ku leh waqooyiga Ciraaq, gaar ahaan saldhig lagu magacabao Bashiq, halkaasoo ay ku tababarayaan Ciidamada Sunniyiinta iyo Kurdiyiinta.
Sabtidii la soo dhaafay Ra’iisul Wasaaraha Ciraaq Haider Al-Abadi ayaa sheegay in aanay Turkiga wax door ah ku lahaan karin dagaalka Mosul lagu xoreynayo, isla markaana aanay uga baahneyn wax ciidan ah
Xoghayaha Difaaca Mareykanka Ash Carter ayaa jimcihii sheegay in Turkiga uu door ka qaadan karo dagaalka Mosul.
Xulafada uu hoggaaminayo Mareykanka ayaa duqeymo cirka ah kaga qeyb qaadanaya duulaanka Mosul, iyadoo ciidamada Ciraaq ay la wareegeen inta badan magaalada.
Dhulgariir kale oo ku dhuftay dalka Talyaaniga